www.xamarcade.com » M/Gobolka Banaadir oo caawa casho sharaf u sameynaya Madaxda M/Goboleedyada
M/Gobolka Banaadir oo caawa casho sharaf u sameynaya Madaxda M/Goboleedyada
Maamulka Gobolka Banaadir gaar ahaan Guddoomiyaha Gobolka ahna Duqa magaalada Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow) ayaa caawa casho sharaf ku casuumay Madaxda Maamul Goboleedyada dalka, taasi oo ka dhaceysa xarunta Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar.
Munaasabaddan casho sharafta ah ayaa waxaa ka qeyb galaya sida uu qorshaha yahay Madaxweynayaasha Maamulada Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo casho sharafta fidiyay.
Hoggamiyeyaasha Dowlad Goboleedyada dalka ayaa Muqdisho u yimid ka qeyb galka shirkii Golaha Amniga Qaranka oo Lixdii bishan ka furmay Madaxtooyada, kaasi oo xalay saq dhexe la soo gaba gabeeyay, lagana soo saaray War-murtiyeed.
Munaasabaddan caawa waxaa ka maqnaan doona oo aanan ka qeyb gali doonin Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo maanta u duulay Magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti.
Ammaanka xarunta Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar ayaa si aad ah loo adkeeyay, Ciidamo ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa galabta dheer xiray jidadka gala xarunta, iyaga oo u diidaya Gaadiidka iyo dadka kale ee caadiga ah.